ပႈပါ Francis စံး၀ဲယခရံဏဖိတႈဘါအတႈသဘ် ႔န႔ဥယမ့ႈဆွ႕ပွၚဆူတႈကတူႈလိဏမုဏ ပွၚပညီတဖဥဒီး အတႈဆဲးတႈလၚတဖဥ. | Radio Veritas Asia
ပႈပါ Francis စံး၀ဲယခရံဏဖိတႈဘါအတႈသဘ် ႔န႔ဥယမ့ႈဆွ႕ပွၚဆူတႈကတူႈလိဏမုဏ ပွၚပညီတဖဥဒီး အတႈဆဲးတႈလၚတဖဥ.
ပႈပါ Francis စံး၀ဲယခရံဏဖိတႈဘါအတႈသဘ် ႔န႔ဥယမ့ႈဆွ႕ပွၚဆူတႈကတူႈလိဏမုဏ ပွၚပညီတဖဥဒီး အတႈဆဲးတႈလၚတဖဥန႔ဥလီၚ.ဒီးမ့ႈတႈအိးထီီဥ ပွၚကညီသ့ဥတဖဥဒီးအတႈဆဲးတႈ လၚတဖဥဆူ တႈသဘ် ႔ဒိဥအပူၚန႔ဥလီၚ.
ခရံဏဖိတႈဘါတႈသဘ် ႔န႔ဥယတမ့ႈမၚကဲထီဥတႈထီဒါလိဏသးဒီးတႈဆဲးတႈလၚ မ့တမ့ႈ သနူလုႈလႈ လ႕ပဒိးန႔ႈဘဥတဖဥန႔ဥယပႈပါ Francis စံး၀ဲ ဖဲမုႈသ႕နံၚ တႈကတိၚလီၚပွၚကမ်႕ႈဖိအခါန႔ဥလီၚ. အ၀ဲကြႈထံဆိကမိဥ၀ဲ စီၚပီလူးယအလံဏပရ႕ယကလၚတံဒီးစံး၀ဲဒဥယ ပွၚခရံဏဖိတဖဥလ႕အပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲး ဘးဒီးတႈသံအကုႈအပွၚခီဖိ်လ႕ကစႈခရံဏအတူႈခီဥတႈဖီွဥတႈနးဒီးအတႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚနဥယမ့ႈအဟ့ဥတူႈလိဏမုဏ ပွၚကညီကိးဂၚဒဲးဒီးတႈဆဲးတႈလၚကိမံၚဒဲးယ ဒီးမ့ႈအအိးထီဥပွၚကညီသ့ဥ တဖဥ ခဲလ႕ဏဒီးတႈဆဲးတႈလၚခဲလ႕ဏဆူ တႈသဘ် ႔ဒိဥဆူဥအပူၚန႔ဥလီၚ.ပႈပါ စံး၀ဲယတႈသးခုကစီဥ အတႈသ ဘ် ႔န႔ဥယတမ့ႈတႈလုႈလႈတမံၚဘဥအဃိယ ပွၚကိးဂၚဒဲးတူႈလိဏအီၚ တန႔ႈဘဥန႔ဥလီၚ.
Open to every culture.
ဘဥဃးဒီးစီၚပီလူးအတႈဆိကမိဥတႈထံဥယမ့ႈ၀ဲ inspired depth တႈနႈပ႕ႈတႈအလီၚအဆီန႔ဥယမ့ႈတူႈလိဏ၀ဲဒဥတႈစူႈတႈနဏယပဏဃုဏဒီးတႈသမ႕ကြံဏတႈန႔ဥယတမ့ႈတႈသမ႕ကြံဏတႈဆဲးတႈလၚဒီးလုႈလႈအသူဥအသးဘဥယမ့ႈဒဥတႈမၚတံဏတဏတႈသးခုကစီဥအတႈစီတႈဆွံဒီးအတႈဂ့ၚတႈသီန႔ဥလီၚ.ပႈပါစံး၀ဲယပွၚခရံဏဖိအတႈသဘ် ႔နီႈနီႈန႔ဥယမၚကဲထီဥပွၚလ႕ကမၚန႔ႈယ ဎြၚ အဖိအလံၚတဖဥအသူဥအသ့ဥလ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚအဂီႈန႔ဥလီၚ.မၚကဲထီဥပွၚလ႕ကသ့ဥညါနႈပ႕ႈ ပတႈဆဲး တႈလၚအလုႈအလႈဖဲပအိးထီဥပသူဥပသးလ႕ပွၚကိးဂၚဒဲးအတႈဆဲးတႈလၚန႔ဥမ့ႈအဂ့ၚ၀ဲဒဥအခါန႔ဥလီၚ.ပႈပါစံး၀ဲယပသ့ဥညါနႈပ႕ႈထီဥယတႈမၚကဲထီဥတႈသးခုကစီဥလ႕တႈဆဲးတႈလၚအခီပညီအတံႈအနီႈန႔ဥလီၚ.ပကဘဥမၚလ႕ပွဲၚထီဥယအုဥခီဥကစႈယဎြၚအတႈသးခုကစီဥအဂ့ၚအ၀ါလ႕တႈပဏဒိဥတႈဂ့ၚတႈ၀ါဒီးတႈမ့ႈတႈတီလ႕အအိဥလ႕တႈဆဲးတႈလၚအပူၚန႔ဥလီၚ.
ပႈပါက့ၚသးသဎုႈဘဥလီၚယတႈကမဥအါမံၚလ႕အကဲထီဥလ႕ယတႈမၚတႈသးခုကစီဥအတႈစံဥစိၚတဲစိၚအပူၚဒိဥမးလ႕ပွၚတနီၚနီၚအဲဥဒိးမၚကဲထီဥဆူဥတႈဆဲးတႈလၚဒိဥတလ႕လ႕တႈဘူဥတႈဘါအပူၚယဒီးတနီၚနီၚအဲဥဒိးမၚကဲထီဥသးယပွၚကိးဂၚဒဲးဆူအတႈဆဲးတႈလၚအပူၚအဃိန႔ဥလီၚ.ပႈပါစံး၀ဲယတႈလ႕စီၚပီလူူးအတႈသးအိဥတႈသဘ် ႔န႔ဥယမ့ႈမူဒါလ႕အပဏဒိဥပဏကဲယ ပွၚကညီကိးဂၚဒဲးအတႈဆဲးတႈလၚယ လ႕အမ့ႈ အိးထီဥအသူဥအသးဆူပွၚကညီတဖဥအတႈဆဲးတႈလၚအဖီခိဥကိးဆ႕ကိးကတီႈဒဲးန႔ဥလီၚ.ဘဥမနုၚအဃိလဲဥယကစႈခရံဏအိဥဖ်ဲဥထီဥယကစႈခရံဏသံယကစႈခရံဏသမူထီဥက့ၚန႔ဥမ့ႈပွၚကိးကလုဏဒဲးအဃိ န႔ဥလီၚ.
New ways of sealing.
ပႈပါ Francis စံး၀ဲဒဥယပကဘဥဃုထံဥန႔ႈယက်ဲအသီလ႕ဘဥဃးဒီးတႈကကတိၚ တႈစူႈတႈနဏအဂ့ႈ လ႕ခါခဲအံၚပွၚကညီဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈန႔ဥလီၚ.ပႈပါကြဲမုဏပွၚလ႕ယတမ့ႈပကဘဥဃ့ထီဥတႈသဘ် ႔လ႕ ပတဂၚအဂီႈ န႔ဥ ဘဥယဘဥဆဥတႈသဘ် ႔အဂီႈတႈကီတႈခဲတဖဥပကဘဥလဲခီတၚအီၚတဖဥန႔ဥယ ပကဘဥလဲၚ တုၚဆူ အလ႕အပွဲၚန႔ဥလီၚ.တႈန႔ဥအဃိယ အ၀ဲစံး၀ဲယတႈဘါဖိ လ႕အလဲၚတႈဖိတဖဥန႔ဥယ မ့ႈဒ္ပွၚလဲၚတႈလ႕ခီဥဖိတဖဥယလ႕အလဲၚထြဲယတႈဟးထီဥကြံဏ Exdous အသိးန႔ဥလီၚ.ဒ္သိးကပူၚဖ်ဲးဒီး တႈကဲကုႈကဲပွၚအဂီႈယ ပကဘဥလဲၚတုၚဆူတႈသဘ် ႔အတႈလ႕တႈပွဲၚအအိဥန႔ဥလီၚ.
Pope: Christian freedom leads to welcoming people and cultures. Vatican News, 13 October 2021